Tansaaniya: Baanka Adduunka oo Dib-u-kicinaysa Taageero - TELEEXA
ACCUEIL » DHAQAALAHA • International »Tansaaniya: Bangiga Adduunka oo dib u bilowday gargaar
Tansaaniya: Baanka Adduunka oo dib u bilowday gargaar
Tansaaniya waxay soo afjartay heshiiska maalgelinta Baanka Adduunka. Dar es Salam ayaa ka faa'iideysan doonta 1,7 bilyan oo doolar oo ka socota hay'adda Bretton Woods. Baqshadda waxaa loo isticmaali doonaa in lala dagaallamo saboolnimada, si loo maalgaliyo mashaariicda kaabayaasha kala duwan ee kuwa kale.
Afar boqol oo milyan oo doolar ayaa loo isticmaali doonaa, tusaale ahaan, waaxda waxbarashada, halka 300 malaayiin doolar loo isticmaali doono inay la dagaallamaan saboolnimada. Marka loo eego Tansaaniya, gabagabada heshiiskaan waa wax kasta oo warka xun xun.
Baanka Adduunka ayaa hakiyay dhawr bilood ka hor 300 milyan oo doolar oo gargaar ah ka dib markii Madaxwaynaha John Magufuli uu mamnuucay gabdhaha uurka leh helitaanka dugsiga.
Dabka Our Lady: Elizabeth II in Putin, jawaab celinta sii wadaan